သူ့ကို မြင်သူတိုင်းက ကြည့်ကောင်းသည်ဟု ချီးမွမ်းကြသည်။ သူ့မျက်ဆံများက နက်သော်လည်း စိမ်းဝေ့ဝေ့သန်းသည်။ အသားအရေ က ဖြူကြည်သည်။ နေရောင်ထိလျှင် နီရဲလွယ်သည်။ The Guns of Navarone ရုပ်ရှင်ထဲက ဟိုခေက်က မင်းသားကြီး Gregory Peck နှင့် နှုတ်ခမ်း မေး မျက်နှာကျ ဆင်သည်ဟု ပြောကြသည်။ သွယ်ပြီး အနည်းငယ် ဖြေလျော့ ကိုင်းညွတ်သော ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် အမျိုးသား တစ်ဦးအတွက် မနိမ့်မမြင့်လွန်းသော အရပ်ကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ ပျော့ပျောင်းသော ဆံပင်များ မီးခိုးဘက် သန်းလာချိန်တွင် … ရုပ်ရှင်တခုထဲမှာ ဗိုလ်ဗကိုရဲ့ အဲဒီ ဆံပင်အရောင်မျိုးကို သဘောကျခဲ့တာ.. ဒီအချိန်ကို စောင့်ခဲ့ရတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာပေါ့.. ဟု ခပ်ပြုံးပြုံးပြောပြီး ဘယ်တော့မှ ဆေးမဆိုးခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
တချို့က သူ့ကို ဆရာတက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်၏ ဇာတ်လိုက်တစ်ဦးဦးနှင့် တူသတဲ့။ သူက လက်ဝဲဆန်ခဲ့ဖူးသူ။ တက္ကသိုလ်တွင် တက်ကြွခဲ့သူ။ လျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက် ရှိတတ်သလို မည်သူမှ မသိသည့် အားငယ်စိတ်လည်း ရှိခဲ့လေသလားတော့ မသိ။ ပင်မြင့်မှ ကံ့ကော်ပန်းကို ငေးရုံသာငေးခဲ့ပြီး အိမ်အနားက စံပင်ပွင့်ကလေးကိုပဲ လှမ်းဆွတ်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ စပယ်ရုံကလေးကို ရေလောင်းပေါင်းသင်ကာ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရင်း ဘ၀ကို ရိုးစင်းစွာပဲ ဖြတ်သန်းခဲ့ရလေသည်။
သူက ရောက်လေရာနေရာမှာ သူ့မူလ အလုပ်တာဝန်နှင့် သိပ်မဆိုင်သော ကိစ္စများမှာ ဦးဆောင်ဦးရွက် လုပ်ခဲ့ ရသော်လည်း တကယ်တမ်း ဘ၀မှာ သူလုပ်ချင်တာတွေတော့ သေသေချာချာ လုပ်ခွင့်မကြုံခဲ့ပါ။ တနေ့နေ့ အနားယူချိန်မှာ စာတွေရေးမယ် ဟု မကြာခဏ ပြောခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် သူကိုယ်တိုင်ကပဲ ပုံနှိပ်ခွင့် မရသော စာတစ်အုပ် ဖြစ်သွားခဲ့သည်။
တကယ်တော့ သူက စနစ်တစ်ခု၏ ကျောချခြင်းကို ခံလိုက်ရသော သားကောင် တစ်ကောင်ပင် ဖြစ်သည်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက သူကအမြဲ နေရာပေး ဆက်ဆံခြင်းခံရသူ သူ့ကို သူရဲကောင်းသဖွယ် ချစ်ခင်ကိုးကွယ်သူ တစ်ယောက်တော့ ရှိလေသည်။ အဲဒီ စနစ်ကြီး အကြောင်း ပွင့်လင်းနားလည်လာလို့ သူ့ကိုပြောပြ ဆွေးနွေးချင်လာသည့် တစ်နေ့မှာတော့ ဘ၀က သူ့ကို အကြီးအကျယ် ရိုက်ချသွားခဲ့ပြီ။ စိတ်ကြိုးကလေး ပါးလျသွားသော သူ့ကို ရင်နာစွာ……။
အရင်ကလို ရေနွေးကြမ်း တစ်အိုးဘေးချလို့ စကားတွေ အကြာကြီး တညလုံး ထိုင်ပြောလိုက်ချင်သည်။ သူက ငေးလျှက် ကြည့်နေမှာလား။ ဒေါသတွေထွက်ပြီး ထအော်မှာလား။ ငါဘာမှ မသိဘူး ဟု ပလုံးပထွေးနှင့် သနားစဖွယ် ပြန်ပြောမှာလား။ ဟိုအရင်အချိန်များ ခဏလောက် ဖြစ်ဖြစ် ပြန်ရချင်ပါသည်။
နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ၆၆ နှစ်မြောက် မွေးနေ့မှသည် ချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ အချိန်အကြာကြီး နေထိုင်နိုင်ပါစေ ချစ်ဖေဖေ။
Posted by pandora at 10:40 PM9comments
Posted by pandora at 2:47 AM7comments
ပြောင်းမယ် ပြောင်းမယ်နဲ့ ဒီနေ့တော့ တကယ်ကိုပဲ ရုံးစားပွဲအသစ်ကို ပြောင်းပါပြီ။ လက်ပ်တော့ပ် အသစ်တစ်လုံး ပေးတယ်။ ထင်ထားတဲ့ အတိုင်းပဲ ဖောင့်အသစ် ထပ်ထည့်ဖို့ လုံခြုံရေး ပေါ်လစီအရ ခွင့်မပြုပါဘူး။
အရင် ကွန်ပြူတာကတော့ ဇော်ဂျီ လက်ကွက် မရှိပေမယ့် ဇော်ဂျီဖောင့်လေး ရှိတော့ ရုံးကဆိုရင် မောင်လှရဲ့ ၀င်းဇော်ဂျီ ကွန်ဗာတာထဲမှာ စာရိုက်ထည့် လို့ရသေးတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ၀င်းအင်းဝလို တခုခုနဲ့ရိုက် နောက်မှ ဇော်ဂျီပြန်ပြောင်း။ အခုတော့ ရုံးမှာ အားချိန်ဆိုရင် မြန်မာစာ လုံးဝရိုက်လို့မရတော့ဘူး။ ဂျီမှာလည်း မြန်မာလို မမြင်ရတော့ဘူးပေါ့။ (ဂျီတော့ခ် တောင် တပ်လို့ ရမရ မသိသေးဘူး။) အီးအိုတီ လုပ်မထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေဆိုရင်လည်း မြင်ရမှာမဟုတ်တော့။
မျှော်လင့်ပြီးသားပဲလေ။ တခုခုလိုချင်ရင် တခုခုကို ပေးရတယ်။ ကိုယ့် စိတ်ဝင်စားမှု ပျော်ရွှင်မှု အချင်းချင်းကို compromise လုပ်လိုက်ရတာပဲ။ ဒီ့ထက် ကြီးကျယ်တဲ့ အရာတွေ ကျရင်တော့ ဘ၀ကို ဘ၀နဲ့ပဲ လဲရမှာများလား။
ရုံးကနေ အားချိန်မှာ မြန်မာစာရိုက်တာ ဒါနောက်ဆုံး ဖြစ်မယ်။ (အိမ်မှာ အားလပ်ချိန်ပဲ လုပ်ဖြစ်တော့မှာပေါ့။) မကြာခင်မှာ ဒီကွန်ပျူတာ အဟောင်းထဲက ဖိုင်တွေ အကုန်ဖျက်တော့မယ်။ အကောင်းဘက်က ပြောရရင်တော့ အလုပ်ချိန်မှာ (တကယ်တော့ အားချိန်၊ နေ့လည်စာ စားချိန်တွေပါ) အာရုံအပိုတွေ မလုပ်ဖြစ်တော့ရင် အလုပ်ထဲလည်း ပိုပြီး အာရုံစူးစိုက်မှု ရလာမှာပေါ့လေ။ အာရုံလွင့်ခဲ့တာလည်း တော်တော်ကြာပေါ့။
Posted by pandora at 5:18 PM5comments
Chaos က ရေးခိုင်းထားတာပါ။
အဲဒီလို ဟစ်ကြွေးလိုက်ချင်ပေမယ့် လူဆိုတာ တခုခုတော့ ကြောက်ကြတာချည်းပဲ ဆိုတော့ ပန်ဒိုရာလည်း ကြောက်တာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မြန်မာစကားက ရွံရှာတာကို ဖြစ်ဖြစ် ထိတ်လန့်တာကို ဖြစ်ဖြစ် စိုးရိမ်ပူပန်တာကိုဖြစ်ဖြစ် ကြောက်ရွံ့တာကိုဖြစ်ဖြစ် ကြောက် ဆိုတဲ့ စကားတစ်လုံးနဲ့ပဲ သုံးချင်သုံးတတ်တာကို မှတ်သားမိပါတယ်။ ဥပမာ ဆိုရရင် သရဲကို ကြောက်တာနဲ့ ကြွက်ကို ကြောက်တာနဲ့ ကြောက်ပုံကြောက်နည်း တော့ တူမယ်မထင်။ စကားကတ်တယ် လို့တော့ မထင်ပါနဲ့။
Phobia ဆန်ဆန်ကြောက်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ပန်ဒိုရာက တွန့်တွန့်တွားသွား သတ္တ၀ါ (creepy crawly creature) တွေကို အလွန် ရွံကြောက်ပါတယ်။ ကိုယ့်အသားနဲ့ ထိသွားမှာကို သိပ်စိုးတယ်။ တီကောင်လို ပြောင်ချောချောဆို ပိုဆိုး။ စေ့စေ့တောင် မကြည့်ချင်ဘူး။ အိ အိ။ (လာတို့တဲ့လူကို တသက်မခေါ်ဘူးမှတ်။) ဖားတို့ ကြွက်တို့တော့ မကြောက်ပါ။ ငယ်ငယ်ကဆို မိုးဦးကျမှာ လမ်းဘေးမှာ ဖားပေါက်စလေးတွေ အပြိုင်းအရိုင်း ပေါနေချိန်ဆို ၀ှက်ထားပြီး ကြောက်တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းကို ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ လက်ထဲထည့်ပေးတာ။ (အဟီး.. သူများကိုတော့ သွားစတယ်။ အခုတော့ အဲဒီအကျင့်တွေ မရှိတော့ပါဘူး။ ယုံလိုက်။)
ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့တာ ဆိုရင်တော့ သရဲ တစ္ဆေနဲ့ ပတ်သက်လို့ တကယ်ရှိတာ မရှိတာ အသာထား၊ သာမန် သူလိုကိုယ်လိုပဲ ကြောက်ခဲ့ဖူးတာပဲ။ (သရဲကားတော့ ကြည့်ရတာ ကြိုက်တယ်။) ဒါပေမယ့် လူသူနည်းပါးတဲ့ အဆောက်အဦကြီးတစ်ခုမှာ သရဲခြောက်တယ်လို့ ကြားဖူးခဲ့တဲ့ အခန်းတစ်ခန်းရဲ့ မျက်စောင်းထိုးက အခန်းလေးတစ်ခုမှာ နှစ်နဲ့ချီပြီး တစ်ယောက်တည်း နေခဲ့ဖူးတယ်။
စိုးရိမ်တာမျိုးဆိုရင်တော့ ကိုယ်ချစ်ခင်တဲ့လူတွေ စိတ်ဆိုးမှာကို စိုးတတ်တယ်။ အထူးသဖြင့် သူ ပေါ့။ မကြိုက်နိုင်တာတွေ လုပ်မိတာ လျော့အောင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံး စိတ်ကိုဆုံးမ ကြိုးစားနေတာပဲ။
မပြည့်ဝသေးတဲ့ လူ ဆိုတော့လည်း တရားသဘောအရ တွေ ဘာတွေဆိုရင်တော့ ကြောက်သင့်တာတွေ မကြောက် မကြောက်သင့်တာတွေ ကြောက်လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာပဲ။ လောလောလတ်လတ် ခေါင်းထဲမှာ ရှိနေတာ အနေနဲ့ အကြောက်ဆုံးကတော့ အကြောက်တရား ကိုယ်တိုင်ကို ဖြစ်နေတယ်။
The only thing we have to fear is fear itself ဆိုတဲ့ စကားလေး တော်တော်များများ ကြားဖူးကြမှာပါ။ ပြောခဲ့သူကတော့ အမေရိကန် သမ္မတ (ဟောင်း) Franklin D. Roosevelt ပါ။ ဒီမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို အကြောက်တရားမျိုး ရဲ့ အကျိုးဆက်လို့ စဉ်းစားလိုက်ရင် အော့ဇ၀စ်ခ်ျ နာဇီအကျဉ်းစခန်းကြီးကို မြင်ယောင်လာတယ်။ ဟီရိုရှီးမား မှာ ကြဲချလိုက်တဲ့ နျူကလီးယား မှိုပွင့်ကြီးကို မြင်ယောင်လာတယ်။ World Trade Centre ကြီး မြင်လာတယ်။ တန်ခိုးရှင်ရဲ့ တစုံတရာ အမိန့်အောက်မှာ ဖုံမှုန့်တွေ ဖုံးလွှမ်းလို့ ကျောက်တောင်လို မာကျောတဲ့ နှလုံးသားတွေနဲ့ အသက်ကိုစတေးဖို့ ၀န်မလေးကြသူများကို မြင်ယောင်လာတယ်။ အနီးကပ်ဆုံး တနေရာမှာတော့ သနားစရာကောင်းတဲ့ မျက်လုံးဝိုင်းတွေနဲ့ ဘာကိုမှန်းမသိ စောင့်မျှော်ကာ ပါးစပ်ပိတ်ပြီး သည်းခံနေကြတဲ့ သိမ်မွေ့တဲ့ နှလုံးသားတွေကို မြင်လာတယ်။ အပြန်အလှန် ကြောက်ကြတယ်။ ကြောက်လို့ ပြန်ခြောက်တယ်။ ခြောက်လို့ ပိုကြောက်တယ်။ အကြောက်တရားနဲ့ ကစားတဲ့ပွဲတွေက အရင်းအနှီး ကြီးလှတယ်။
ရုစဗဲ့ ရဲ့ စကားက မဆုံးသေးပါဘူး fear itself ဆိုတာကို အခုလို ဆက်လင်း ထားပါသေးတယ်။
"… let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself—nameless, unreasoning, unjustified terror which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance...."
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု မရှိသော၊ တိုးတက်မှုကို ဟန့်တားစေသော၊ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ အပြောင်းအလဲတစ်ခုကို ပိတ်ဆို့စေသော၊ အဓိပ္ပာယ်မဲ့ အကြောက်တရားတွေကို ဘယ်လို အတူ ဖယ်ရှားကြမလဲ။
Posted by pandora at 12:23 AM 10 comments
တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ည ရောက်ပြီ။ သည်အချိန်ဆို ချစ်သော အမိမြေမှာတော့ အလင်း၏ အဆင်တန်ဆာ မျိုးစုံတို့ဖြင့် ညကို ခြယ်သ အလှဆင်နေကြရော့မည်။
တန်ဆောင်မုန်း၏ ရွှန်းမြမြလသည် ကိုယ့်အတွက် အမှတ်တရ ရောင်ခြည်တို့ကို ဖြန့်ကျက်စေခဲ့သည်။ ရှစ်တန်း အရွယ်က နေထိုင်ခဲ့သော မြို့ကလေးတွင် အဲဒီနှစ်က နံရံကပ်စာစောင် ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပခဲ့သည်။ တမြို့လုံး အသက် အရွယ် အကန့်အသတ်မရှိ။ ဆောင်းပါး ၀တ္တုတို ကာတွန်း ပိုစတာ အစုံပေါ့။ ဆီမီးရောင်မှုန်း တန်ဆောင်မုန်း အမည်ဖြင့် ဆောင်းပါးတိုလေး တစ်စောင်ရေးပို့ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာ ဒုတိယဆု ရသည်။ မထမဆုံး အနေဖြင့် ကိုယ့်စာလေးကို အများပြည်သူ လာကြည့်နိုင်အောင် ဖော်ပြခွင့်ရသည်မှာ ပျော်စရာလည်း ကောင်း စိတ်လှုပ်ရှားစရာလည်း ကောင်းလှသည်။
ဆီမီးရောင်မှုန်း တန်ဆောင်မှုန်း ဆောင်နှုန်းခေါ်သကား။ ဟထိုးပျောက်ကာ ပြောင်းရွှေ့ကာ မုန်းသာ ခုထင်ရှား.. တဲ့။ (အနည်းငယ် မှားကောင်းမှားမည်။) စာထဲမှာ ထည့်ရေးမိတာတွေ တချို့ သတိရသေးသည်။ ပုဂံခေတ် ကျောက်စာတွေမှာတော့ တန်ဆောင်မှုန် လို့ရေးကြသတဲ့။ ဟထိုးပျောက်ပြီး တန်ဆောင်မုန်းလို့ ဖြစ်သွားသတဲ့။ အဲဒီတုန်းက သတင်းစာ အပါအ၀င် စာအုပ်တွေ ဟိုဖတ်ဒီဖတ်နှင့် ရေးခဲ့တာကိုတော့ သတိရသေးသည်။ အကိုးအကား အတိအကျတော့ မမှတ်မိတော့။
တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ဟာ ဆီးနှင်း၊မြူ၊တိမ်၊သူရိန်၊မီးခိုး ညစ်မျိုးငါးဝ ကင်းစင်ပ ပြီး လတွေထဲမှာ အကြည်လင်ဆုံး ရာသီပိုင်ရှင်တဲ့။ လပြည့်ကြီး ပိုဝိုင်းတာကို ကြည့်ချင်လျှင်တော့ လပြည့်ကျော် ၁ ရက်မှာ ပိုဝိုင်းသည် ဆိုတာလည်း မှတ်သားဖူးသည်။ ဖုံးတုန်းလုံးတုန်း တန်ဆောင်မုန်း ဆိုတာလည်း ရှိသေးသည်။ စပါးပင်တွေမှာ စပါးသီးတွေ အစေ့အဆန် တည်လို့ နို့ရည်များဖြင့် ဖုံးတုန်း လုံးတုန်း ဖြစ်လာချိန်ဟု ဖတ်ဖူးခဲ့သည်။
ဆေးပေါင်းခသည့် ညကလည်း တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညပေပဲ။ အိမ်မှာဆိုလျှင်တော့ မယ်ဇလီဖူး သုတ်စားကြတာကို သတိရမိသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလမှာ မြွေပါးကင်းပါးလည်း ထွက်တတ်သည်။ ငယ်ငယ်က လေးနှစ်လောက်အရွယ် အမျိုးတွေရှိသော နယ်ကို သွားလည်ရင်း ရေချိုးနေတုန်း ကင်းအကိုက်ခံရလို့ ငိုတာ တော်တော်နဲ့မတိတ်ဘူးဟု မေမေကပြန်ပြောဖူးသည်။ သြော်.. လက်ကိုကိုက်တာပါတဲ့။
လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်ခဲ့ရသော ငယ်နုစဉ် ကာလတချို့က ကျီးမနိုးပွဲ လုပ်ကစားကြတာကို အမှတ်ရသေးသည်။ စောရနက္ခတ် အကြောင်းပြကာ ပျော်တတ်သူတို့က စိတ်မဆိုးကြစတမ်း ပျော်စရာရှာချိန်မှာ မီးထွန်းသူကထွန်း၍ ကထိန် သင်္ကန်း မသိုးသင်္ကန်း ယက်လုပ်ပြိုင်ပွဲများဖြင့် ကုသိုလ်ပြုသူက ပြုပေမည်။ ချစ်စရာ့ မြန်မာဓလေ့များ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ အတွက်တော့ ဤညသည် အဇာတသတ်မင်းကြီးကို သာမညဖလ သုတ်တော် ဟောကြား ခဲ့သော သာမညဖလ အခါတော်နေ့ အဖြစ်လည်း အလေးအမြတ် ရှိကြသည်။ တချိန်ကတော့ တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညတစ်ညသည် ပူပန်နောင်တများဖြင့် လူးလိမ့်ကာ အိပ်မပျော်နိုင်သော အဖသတ်သား တစ်ယောက်ကို တရားဖြင့် အေးမြစေခဲ့သည်။ ဤသို့ဆန်ဆန် ကျူးလွန်ပြစ်မှား ဂိုဏ်းသင့်သူ အချို့ကတော့ တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့ ရောက်လည်း နောင်တဆိုတာ အဘိဓာန်ထဲမှာ ရှိပါသေးရဲ့လားမသိ။
လပြည့်ကို မျှော်ကြည့်ရင်း ပုံရိပ်အချို့ ဖမ်းယူခဲ့သည်။ တိမ်များလွင့်နေသဖြင့် ကင်မရာကို အတော် ချိန်ရိုက်ရသည်။ ကိုယ့်မြေ၏ ရာသီဥတု အနေဖြင့် အကြည်လင်ဆုံး ကောင်းကင်ကို တန်ဆောင်မုန်းလက ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း ဤကျွန်းပိစိတွင် သာသော တန်ဆောင်မုန်း လပြည့် ကတော့ သူရိန်မီးခိုးတို့ မကင်းပါလားဟု မကျေမနပ် ဖြစ်မိသည်။ ကမ္ဘာ၏ အခြား တဖက်မှာတော့ လမင်းကို မမြင်ရသောသူများပင် ရှိနေပါလားဟု တွေးမိပြန်တော့လည်း…..။
Posted by pandora at 12:15 AM3comments
ဒီကြွေးရှင် က ပူနေတော့ ကြွေးပူကို အရင်ဆပ်လိုက်ပါတယ်။
ဆံပင် ။ ။ သဘာဝအမည်းရောင်။ ဆေးဆိုးမထား။ ပခုံးခန့်ရှည်လျား။ ဆံပင်လုံးသေးမျှင် အဖျားတွန့်ကောက်။
နဖူး။ ။ လေးထောင့်ကျ။ မကျယ်ပါ။ မပြောင်ပါ။
မျက်လုံး မျက်ခုံး။ ။ အမည်းရောင်။ မျက်နှာတခုလုံးတွင် ကြည့်ပျော်ရှုပျော် အရှိဆုံးအရာဟု သူငယ်ချင်းများက နှစ်သိမ့်ပြောကြ။ သို့သော် တချိန်ချိန် မျက်မှန်တပ်ရလျှင် မမြဲသော တရားသဘောဖြင့် အဖုံးကွယ်ခံ သွားရလေမည်။
နှာတံ။ ။ မချွန်လွန်း မပြားလွန်း မကြီးလွန်း မသေးလွန်း
နှုတ်ခမ်း။ ။ မထူလွန်း မပါးလွန်း
မုတ်ဆိပ်ကျင်စွယ်။ ။ Not Applicable
နားရွက်။ ။ ကြည့်ကောင်းရုံ ပညာရှိပီသရုံ အချိုးတကျ ကားသည်။ (မောင်တက်စ်တို့လို အရုပ်ဆိုးစွာ ကားခြင်းမဟုတ်.. ခွိခွိ၊)။ နားပေါက်၂ ဘက် ရှိသည်။ ၂၀၀၆ ကမှ ဖောက်ခဲ့။
မျက်နှာပေး။ ။ အလေးအနက် စဉ်းစားနေချိန်တွင် မှုန်ကုတ်ကုတ် ရှိတတ်။ သဘောကျနေလျှင် သွား ၃၂ချောင်း ပေါ်အောင်ရယ်တတ်။ စိတ်ကူးယဉ်နေလျှင် တယောက်တည်း ပြုံးစိစိ စပ်ဖြဲဖြဲ ဖြစ်နေတတ်။
အသားအရောင်။ ။ မဖြူပါ။ သို့သော် မညိုလွန်းပါ။
အရပ်အမောင်း။ ။ မနိမ့်ပါ။ မမြင့်ပါ။
ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်။ ။တချိန်က အလွန်အမင်း ပိန်ခဲ့ဖူး။ ယခု BMI ထဲ ၀င်ဆန့်လာပြီ။ အသက်ကလေး ရလာသဖြင့် နောင်တွင် ပုံပျက်အောင် ၀ကောင်း ၀မည်။ အာမမခံ။
ခြုံပြောရလျှင် ထူးထူးခြားခြားမရှိပါ။ လှသည်မမည် ရုပ်ဆိုးသည်လည်းမဟုတ် သာမန်ရုပ်ရည်ဖြစ်။ လူကြားထဲ ထင်းနေသည့် ရုပ်ရည်ပိုင်ရှင်မျိုး မဟုတ်။ စပိုင် လုပ်ငန်းများ လုပ်ရန် အထူးသင့်တော်သည်။
ပို့စ်များကို ကြည့်၍ အကဲခတ်နိုင်သည်။ (ပြောပြရမှာ စိတ်မရှည်ခြင်း)
ပြန်ဖတ်ရမှာ ပျင်းသလား။ ကဲ.. ဒါဆိုလည်း အတိုချုပ်ပြောရမှာပေါ့။ (စိတ်ကောင်း အနည်းငယ် ရှိတတ်ခြင်း)
တကယ်တော့ လူဟာလူစိတ်ပဲပေါ့..ကဲ။ (တခါတလေ ဘုကျကျပြောတတ်ြခင်း)
ပရိုဖိုင်းမှာလည်း ရေးထားပြီးသားပဲ။ (အပျင်းခိုခြင်း)
အရက်သေစာ လောင်းကစား . အာ..ဒါတွေနဲ့တော့ အားလုံး လုံးဝ ကင်းစင်တယ်။ စိတ်ချ။ (တခါတလေ လိမ်တတ်ခြင်း.. အဲလေ..)
ဘာအရောင်ကြိုက်သလဲ ဘာညာတွေတော့ မပြောချင်ဘူး (လျှို့ဝှက်တတ်ခြင်း)
မြန်မာထမင်းဟင်းကို ပိုနှစ်သက်တတ်တာတွေ ဘာတွေလည်း ပြောမနေတော့ဘူး။ (ရှေ့ကဖုံးလည်း နောက်ကပေါ်တတ်ခြင်း)
တကယ်တော့ ဒါမျိုးတွေ မရေးချင်ဘူး ကြွေးရှင်ကလာပူနေလို့ရေးရတာ။ (အားနာတတ်. ကြောက်တတ်ခြင်း)
တော်ကြာမရေးလို့ လာမလည်တော့ရင်ဒုက္ခ (အပေါင်းအသင်း မင်ခြင်း)
အခုတော့ ကိုယ့်အကြောင်းတွေ သိကုန်ပြီ။ ဘလော့ လာဖတ်သူတွေ များလာဦးမှာပဲ အဟိ.. (စိတ်ကူးထဲ တိုက်အိမ်ဆောက်ခြင်း)
ဒါပေမယ့်လည်း တကယ်ကတော့ ပန်ဒိုရာဆိုတာ နာမည်ကျော်ပြီးသားပါလေ ငှက်ငှက်.. (ကြွားတတ်ခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးခြင်း)
အကောင်းဆုံးအချက်။ ။ မိမိစိတ်ဝင်တစား ခင်မင်လိုသူ တစ်ဦးဦး တွေ့ပါက နှစ်ရှည်လများပင် ကြိုးစားရပါစေ၊ စိတ်ရှည် သည်းခံစွာ မရရအောင် လိုက်လံခင်မင်တတ်သည်။ ထိုသူများသည် ကံကောင်းသူများ ဖြစ်သွား တတ်သည်။
အဆိုးဆုံးအချက်။ ။ စကားကြီးစကားကျယ် ပြောကာ ဆရာကြီး လုပ်တတ်သည်။ မယုံက နိဂုံးစာပိုဒ်ကို ဖတ်ပါလေ။
ခြုံပြောရလျှင် ကိုယ့်စိတ် ကိုယ့်အကြောင်းကို ကိုယ်တိုင် အသေအချာ သိလို့ကတော့ အောင်မြင်သော အေးချမ်းသော လူသား တစ်ယောက် ဖြစ်နေမှာပေါ့။ သတိ ဆိုတာကလည်း ခက်သား။ စိတ်၏ အနားသတ်တွင် စင်္ကြန်လျှောက်ရင်း ကံကြမ္မာလေကို ဆန်ကာ ရှင်သန်ခြင်း မီးအိမ်ကို ထွန်းညှိဖို့ ကြိုးစားနေသူသည် ပန်ဒိုရာဖြစ်သည်။
Posted by pandora at 9:51 PM 14 comments
လူသူတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ တောင်ကုန်းတစ်လုံးပေါ်မှာ အ်ိမ်ကလေးတစ်လုံး ရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါစို့။ အဲဒီ အ်ိမ်ကလေးမှာ ပြတင်းပေါက် သေးသေးလေး တစ်ခုရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါစို့။ အဲဒီ ပြတင်းပေါက်ကလေး အနားမှာ ဝေ့၀ဲ တိုက်ခတ်နေတဲ့ ညင်သာလေကလေး ရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါစို့။
ရာသီဥတု သာယာတဲ့ နံနက်ခင်းတစ်ခုမှာ အရင်က အမြဲတမ်း ပိတ်ထားခဲ့တဲ့ ပြတင်းပေါက် သေးသေးလေး ပွင့်သွားတယ်။ ပြတင်းပေါက်ကလေးကို အရင်က ဘာလို့ ပိတ်ထားခဲ့ပါလိမ့်။ တခုခု ၀င်လာမှာ စိုးလို့လား။ တခုခု ထွက်သွားမှာ စိုးလို့လား။
လေကလေး က ဟို့ဝေ့ဒီဝိုက် အကဲခတ်နေရာကနေ ဖွင့်ထားတဲ့ ပြတင်းပေါက်ကလေးထဲ စူးစူးစမ်းစမ်းနဲ့ ဖြတ်ကနဲ ခုန်ဝင်သွားတယ်။ မဲမှောင်နေတဲ့ အခန်းကျဉ်းကလေးထဲက ဖုန်မှုန့်တွေ ကြပ်ခိုးတွေကို လေကလေးက မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ် ။ တောတောင်တွေကို ဖြတ်သန်း သယ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ စိမ်းစိုလတ်ဆတ်မှုတွေကို နေရာချပေးလိုက်တယ်။ ပြတင်းပေါက်ကလေးလည်း အံ့သြပျော်ရွှင်လို့။ လေညင်းကလေးလည်း ၀မ်းသာလို့။
ဒီလိုနဲ့ မနက်မနက်တွေရောက်ရင် လေညင်းကလေးက တောင်ကုန်းပေါ်ကို အပြေးကလေး ရွက်လွှင့်လာတယ်။ ပြတင်းပေါက်ကလေးက အဆင်သင့်ဖွင့်ပြီး စောင့်နေပေးတယ်။ နံနက်ခင်းရဲ့ လန်းဆန်းမှုတွေကို ကြည်ကြည်လင်လင် အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ဖလှယ်ကြတယ်။
လေ ဆိုတော့ အစိုးမရခဲ့။ ရာသီဥတု မသာယာတဲ့ တနေ့မှာ လေညင်းကလေးက လေရူးကလေး အဖြစ်ကို ကူးပြောင်းသွားခဲ့တယ်။ လေပွေလေရူးကလေးက ပြတင်းပေါက် ကလေးကို တိုးဝှေ့ပြီး မူးမူးမိုက်မိုက် ၀င်တိုက်ပစ်လိုက်တယ်။ ပြတင်းတံခါးတွေ လေရူးအဝှေ့မှာ ၀ုန်းဒိုင်း နဲ့ ပိတ်လိုက်ပွင့်လိုက် ဖြစ်သွားတယ်။ အိမ်ထဲမှာလည်း ပစ္စည်းတွေ ဟိုဒီ လွင့်စင်ကုန်တယ်။
ပြတင်းပေါက်ကလေးဟာ လေရူးရဲ့ သဘာဝကို တော်တော် လန့်သွားပုံပေါ်တယ်။ အဲဒီညက မိုးချုပ်လို့ ပိတ်လိုက်တဲ့ ပြတင်းတံခါးလေးဟာ နောက်တနေ့ မိုးလင်းချိန်မှာလည်း ပြန်ပွင့်မလာတော့ဘူး။
အခုတော့ လေရူးကလေးက လေနုအေးအဖြစ် ပြန်လည် ငြိမ်သက်သွားခဲ့ပြီ။ မနက် လင်းလာရင် လေညင်းကလေးက ပြတင်းပေါက်ကလေးကို သွားသွားချောင်းသတဲ့။ စေ့စေ့ပိတ်ထားတဲ့ ပြတင်းတံခါးနဲ့သာ ရင်ဘတ်အောင့်အောင် ၀င်တိုးမိပြီး လှည့်ပြန်ခဲ့ရတယ်။
ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက် နှစ်ရက် သုံးရက်.. ။ ပြတင်းပေါက်ကလေးကတော့ ပွင့်မလာတော့ပါဘူးတဲ့။ လေညင်းကလေးဟာ ကြေကွဲလွန်းလို့ တောင်ကုန်းပေါ် တက်လိုက် ဆင်းလိုက် ဂနာမငြိမ်။ လေနုအေးကလေး အေးသထက် အေးလာတယ်။ လေကလေးဟာ ခိုက်ခိုက်တုန်အောင် ချမ်းလို့။ နောက်ဆုံးတော့ မျက်ရည်တွေ သွန်ချပြီး ချုံးပွဲချ ငိုကြွေးတော့တာပဲ။ အဲဒါကို မိုးရွာတယ်လို့ ခေါ်ကြသတဲ့။
လူသူတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ တောင်ကုန်းကလေး တစ်လုံးပေါ်မှာ ပြတင်းပေါက်သေးသေးကို ခပ်တင်းတင်း ပိတ်ထားတဲ့ အိမ်ကလေးတစ်လုံးပေါ် မိုးတွေ သည်းသည်း ရွာ…လို့။ အဲဒီမြင်ကွင်းကို မြင်ရတာလောက် ဘယ်တုန်းကမှ ၀မ်းမနည်းခဲ့ဖူးဘူး။
Posted by pandora at 9:02 AM 15 comments
နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့က ဘာညာလေးမွေးနေ့ကို လက်ဆောင်မပေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဒါနဲ့ သူက ကိုယ့်အသည်းလေးကို လာဖဲ့တယ်။ အသည်းတော့ အဖဲ့မခံနိုင်ဘူး။ ဘာဂါ တစ်လုံး ကျွေးမယ်လို့ နှစ်သိမ့်လိုက်ရတယ်။ အခုတော့ နောက်ကျလက်ဆောင် ဘာဂါလာပြီ။ ဘလော့ဂ် စရေးခါစကတည်းက အခုအချိန်အထိ ခင်မင်ခဲ့ရတဲ့ ညီမကလေး။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့ ခင်မင်မှုတွေ ပိုလို့သာ တိုးလာခဲ့ရတဲ့ ဘာညာလေး.. ဘ၀တလျှောက် စိတ်ချမ်းသာမှုများနဲ့သာ ကြုံတွေ့ရပါစေ…လို့။ (ဘာညာရေ မြန်မြန်လာ။ သူများတွေယူသွားမယ်။)
ချစ်ညီမလေး ဘာညာဘာညာ အတွက်
ငိုရင် အိအိ ရယ်ရင် ကွိကွိ လို့မြည်တတ်သော
နိုင်ငံတရှဲရှဲကျော်သော ဘလောက်ဂါလေး အတွက်
ဘာဂါ၀၀လေး တစ်လုံး ပေးလိုက်မယ်
ချစ်ညီမလေး ဘာညာဘာညာ အတွက်
ဟဲဟဲ.. ဘာဂါတော့ဝေစားမယ် အသဲတော့ဝေမစားဘူးဆိုတဲ့ အမကြီး.. Belated Birthday Burger for BarNyar (BBBB) အတွက်မွားးးးးးးး။
ဘလောက်တုန်း ဘလောက်စဲ ဘလောက်လတ္တံ သောကာလတွေမှာ ဒီလို ဒီလို အမတွေနဲ့ စုံသိရ ဒီလိုဒီလို ပိုစ့်လေးတွေလက်ဆောင်ရတာ ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်ပါဘူး။ ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် မကြီးပန်။
November 18, 2007 7:31 PM
ဘာညာက ဒီလို ကွန်မန့်သွားတယ်။ တကယ်တော့ BBBBB ငါးလုံးပါ။
Belated Birthday Burger for Blogger Barnyar.
Posted by pandora at 7:08 PM7comments
Posted by pandora at 4:28 PM 11 comments
ချစ်လေပြေ က တက်ဂ်ထားခဲ့တာပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းကအဖြစ်ကလေးတွေ။ ဘယ်လို ဆော့ကစားခဲ့ပါသလဲတဲ့။
မှတ်မိသလောက် ငယ်ငယ်က ကစားနည်း အတော်စုံအောင် ကစားဖြစ်ခဲ့သည်။ ကစားဖို့ အချိန်လည်း ကောင်းကောင်း ရခဲ့တာပဲ။ အသက် မတိမ်းမယိမ်းကွာတဲ့ အကိုနဲ့ပေါင်းပြီး ယောင်္ကျားလေးတွေ ကစားတဲ့ နည်းပေါင်းစုံ ကစားသလို မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့လည်း မိန်းကလေးလို ကစားခဲ့သည်။
သားရေကွင်းကလေးတွေနဲ့ပင် ကစားနည်းကစုံလို့။ အကိုရယ် သူ့သူငယ်ချင်းတွေ ရယ်နှင့် ဆိုလျှင် လမ်းမမှာ ၀ါးခြမ်းပြားတိုလေး စိုက်၊ တစ်ယောက်ကို ဘယ်နှစ်ကွင်းကျဆိုပြီး အဲဒီမှာတင်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အဝေး တစ်နေရာကနေ အလှည့်ကျပစ်။ သားရေကွင်း ထွက်ကျသွားအောင် ပစ်နိုင်ရင် ပစ်နိုင်သူကယူ။ နောက်တစ်မျိုးက စည်းဝိုင်းကလေး ၀ိုင်းပြီး သားရေကွင်းကလေးကို အဝေးက တစ်ကွင်းချင်း လက်ဝါးပေါ် တင်ပြီး တစ်ယောက်တစ်လှည့် ပစ်ချ။ ကွင်းလေးအချင်းချင်း ထပ်သွားလျှင်ယူ။ မိုးတွေဘာတွေရွာလို့ အိမ်အောက် မဆင်းရဘူး ဆိုလျှင်တော့ နံရံမှာ သံတစ်ချောင်းစိုက် သားရေကွင်းတွေချိတ် အဝေးကလှမ်းပစ်။ ပြုတ်ကျလျှင်ယူ။
မိန်းကလေးတွေ ကစားနည်း ကျတော့တမျိုး။ သားရေကွင်းတွေ အများကြီး ချိတ်ဆက်ကာ ကြိုးလုပ်သည်။ ပြီးတော့ နှစ်ယောက်က ကြိုးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ ကိုင်ထားပြီး တစ်ယောက်က ကြိုးပေါ်မှာ ခုန်သည်။ ခုန်ပုံခုန်နည်းက အဆင့်ဆင့်။ သတ်မှတ်ထားသော ပုံစံမျိုးစုံနှင့်။ ကြိုးတန်းက တဖြေးဖြေး မြင့်လာသည်။ ခုန်နေတုန်း အမှားဖြစ်သွားလျှင် ကိုယ်က ကြိုးတန်းကိုင်လုပ်။ သူများက ခုန်။ တခါတလေကျတော့ ယောင်္ကျားလေးတွေပါ လာကစားသည်။ မူလတန်းအရွယ်က နေ့လည်စာစားချိန်တွေမှာ ဒီကစားနည်းက ကျောင်းမှာ တော်တော် ခေတ်စားသား။
သားရေကွင်းနဲ့ကစားနည်းလို ဆန်ဆန် တခြားနည်းတွေရှိသေးသည်။ ရွှံ့ဖြင့်လုပ်သော လောက်စာလုံး ဖန်ဂေါ်လီ ၀မ်ဒိုးဟု ခေါ်သောအလုံးမျိုးစုံ ရှိသည်။ အဲဒီလို အလုံးလေးတွေကို စုပုံကာ လှိမ့်သည်။ ကျင်းတူးပြီး ၀င်အောင်လှိမ့်သည်။ တခါတလေ ဂျင်ပေါက်သည်။ ဂျင်ကတော့ သံချောင်းပါလို့ နည်းနည်း အန္တရာယ်ရှိသည်။ ဒိုးထိုးသည်။ မန်ကျည်းစေ့ ခရေစေ့များနှင့် ဇယ်တောက်ကစားနည်း။ အပုံပုံကာ အကွက်ရွှေ့ကစားနည်း ဒါတွေရှိသေးသည်။
မိန်းကလေးဆန်ဆန် စွဲစွဲလန်းလန်း ကစားတာ တစ်ခုကတော့ အရုပ်တမ်း ကစားသည်ဟု ကိုယ့်ဖာသာခေါ်ကြသော ကစားနည်း ဖြစ်သည်။ စက္ကူကို ရှည်ရှည်လေးခေါက် ပြန်ချိုးချပြီး လက်ပုံစံ စက္ကူချောင်းကလေးကို ညှပ်ထိုးကာ မျက်နှာပုံကိုရေးဆွဲပြီး အရုပ်ကလေး လုပ်သည်။ ပြီးတော့ အ၀တ်စလေးတွေ ညှပ်ကာ အကျီအ၀တ်အစား မျိုးစုံဆင်သည်။ စက္ကူဗူးတွေ စုဆောင်းကာ အိပ်ခန်း ဧည့်ခန်း စသည်ဖြင့် အိမ်ဆောက်သည်။ အခုခေတ်လို ဘာဘီရုပ်တွေ ၀မ်းဆက် ဈေးကြီးပေး ၀ယ်ခဲ့ရသည်မဟုတ်။ အားလုံး ကိုယ့်ဖာသာ လုပ်ကြသည်ချည်း။ အရုပ်ပိုင်ဆိုင်သမျှ ကိုယ်တကယ်ပိုင်ရသလို ပျော်ရသည်။
ကလေးတွေ စုမိပြီး လူစုံလျှင် စနေတနင်္ဂနွေလို ပိတ်ရက်ကို အသေအချာ ကြိုချိန်းကာ ကစားကြသည့် ကစားနည်းတွေလည်း ရှိသေးသည်။ တစ်နည်းကတော့ မုန့်ဈေးရောင်းတမ်း။ အဲဒါက အစကတည်းက ကိုယ်ဘာရောင်းမည်ဆိုတာ ကြိုညှိထားကြရသည်။ ထမင်းဟင်း ရောင်းမည့်လူနှင့်၊ ခေါက်ဆွဲကြော် ရောင်းမည့်လူနှင့်။ ကုန်ကြမ်း ရောင်းမည့်လူက ရှိသေးသည်။ အဲဒီကစားနည်းဆိုလျှင် အိမ်လမ်းကြား တစ်ခုခုမှာ ကိုယ့်နေရာဖြန့်ခင်း ပြီး ဈေးတန်းကြီး လုပ်ကြသည်။ ပစ္စည်းပစ္စယ အတော်လိုသည်။ လူများဖို့လည်း လိုသည်။ ခင်းထိုင်စရာ ပလတ်စတစ်ပြား ထိုင်ခုံ အိုးခွက်ပန်းကန် ခင်းကျင်းကြ။ သစ်ရွက်ကလေးတွေ အသီးလေးတွေ ပန်းပွင့်ကလေးတွေ လှီးကြချွတ်ကြ ။ သဲတွေ ရေတွေလည်းပါပေါ့။
အဲဒီလို ချိန်းပွဲကစားတာတွေမှာ မည်သူမှ သိပ်ကစားဖူးမည် မထင်တာကတော့ ကတန်းခုန်တန်း ကစားတာ ဇာတ်ထောင်တာ ဖြစ်သည်။ အဲဒီနည်းက အကိုအမ ၀မ်းကွဲတွေ ငယ်ငယ်ကတည်းက စခဲ့တာဖြစ်သည်။ အမျိုးတွေရှိသော နယ်ကို သွားလည်လျှင် အဲဒီမှာ အသက်ဆယ်နှစ်ကျော်ကျော် အကိုဝမ်းကွဲ သူဌေးသား တစ်ယောက်ရှိသည်။ ဇာတ်ပွဲတွေ စတိတ်ရှိုးတွေ ကြည့်ပြီးလျှင် သူကပိုးမသေ။ ဘက်ထရီမီး အ၀တ်အစား တီးမှုတ်တူရိယာ အားလုံး စပွန်ဆာလုပ်ကာ ပွဲထောင်သည်။ ကလေးတွေဆော့သောပွဲကို လူကြီးတွေပါ လာကြည့်ကြသည်။ ငယ်ငယ်က သူ့ကို အားကျသည်။ ကိုယ် ငါးတန်းအရွယ်လောက် ရောက်လာတော့ အိမ်က အစ်ကိုအပါအ၀င် သူငယ်ချင်းတွေကို စည်းရုံးသည်။ ဖျော်ဖြေမည့်သူက ဖျော်ဖြေဖို့ လာကြည့်မည့် သူကလည်း လာကြည့်ဖို့။ အိမ်မှာကလည်း တီးမှုတ်တူရိယာ အတော်များများရှိသည်။ ပုဝါတွေ အ၀တ်အစားတွေ စုဆောင်းကြ။ ရေဆေးရောင်စုံ ဗူးကလေးတစ်ခု ရှိတော့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ နဖူးစည်းတွေ ဘာတွေ စာလုံးဖောက် ရေး။ ဇာတ်ညွှန်းရေး ဇာတ်တိုက်။ အမယ်.. သီချင်းတောင် စပ်လိုက်ကြသေးသည်။ ဒီကြားထဲ စိတ်ကောက်သူနှင့် အိမ်ကသိသွားလို့ အဆော်ခံရသူနှင့် ဇာတ်ခေါင်းခဏခဏ ကွဲကြရသေးသည်။
နောက်တစ်နည်း ကြံကြံဖန်ဖန် ကစားတာကတော့ ပန်ဒိုရာဟု တောင်ရေးမြောက်ရေး လျှောက်ရေး ဖြစ်လာမည့် အလောင်းအလျာလေးက ဗီဇပြခြင်း ဖြစ်သည်။ စာပေကို ၀ါသနာပါသော ဖေဖေက ကိုယ်ငယ်ငယ်က စာအုပ် အရောင်းအငှား နှင့် စာရေးကိရိယာ ဆိုင်ကလေး အိမ်မှာ ဖွင့်ထားသည်။ ပန်ဒိုရာသည် စာအုပ်တွေကြား ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသည်ဟု ပြောနိုင်သည်။ ကျောင်းအားချိန်မှာ စာအုပ်ဆိုင်လည်း ကူထိုင်ရသည်။ အဲဒီ ငါးတန်းနှစ်လောက်မှာပဲ ဖတ်ရုံတင်မက ရေးချင်တဲ့ပိုးက ရွလာသည်။ ဗလာစာရွက်များကို လေးခေါက်ခေါက် စာအုပ်ကလေး ဖြစ်အောင်ချုပ်ကာ တိုလီမုတ်စတွေ ရေးတော့သည်။ ၀ါသနာတူ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို စည်းရုံးသည်။ ပြီးတော့ နှစ်ယောက်ပေါင်းကာ စာအုပ်ပေါက်စကလေးတွေကို အတန်းထဲမှာ သူငယ်ချင်းတွေကို ငှားစားသည်။ သူတို့က ဖတ်ချင်လျှင် ဗလာစာရွက် အလွတ်နှင့် ပေးချေကာ ငှားရသည်။ အဲဒီရလာသော စာရွက်လွတ်များမှာ ကိုယ်တို့က အသစ်ထပ်ရေးနှင့် ဟန်ကိုကျလို့။ နေပါဦး .. အဲဒီတုန်းက ကလောင်နာမည် .. တက္ကသိုလ် ပန်ဦးတဲ့ … ဟားဟား။ သူငယ်ချင်းနာမည်ကလည်း တက္ကသိုလ် တော့ ပါသည်။ မေ့သွားပြီ။ ကလေးတွေ ကြံကြံဖန်ဖန်။ အခုပန်ဒိုရာ နာမည်ယူတော့ အဲဒီတုန်းက တက္ကသိုလ် ပန်ဦးကို မေ့နေသည်။ ပန်ချင်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်။ အခုဒီစာရေးမှ သတိရသည်။
အဲဒီကိစ္စတွေ ငါးတန်းကျောင်းပိတ်ခါနီးမှာ နိဂုံးချုပ်သွားပုံကတော့ ဒီလို။ ပန်ဒိုရာက အဲဒါတွေလုပ်နေတာကို အိမ်ကသိသွားမှာတော့ ရှက်သည်။ အစ်ကိုကိုလည်း ပြန်မပြောဖို့ ပိတ်ထားသည်။ စာအုပ်ကလေးတွေ အားလုံးကို သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ထံမှာ အပ်ထားသည်။ ကျောင်းဆင်းလျှင် သူက သိမ်းပေးသည်။ တနေ့တော့ သူ့အဖေက တွေ့သွားသတဲ့။ ကလေးတွေဖြစ်ပြီး ၀တ္တုတွေ ချစ်ကြောင်းကြိုက်ကြောင်း ပါတာတွေ ရေးရမလား ဆိုပြီး သတင်းစာလို့ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ကလေး တစ်အုပ်ကလွဲလို့ ကျန်အားလုံး ဖြဲဆုတ်လိုက် သတဲ့။ အဲဒီခေတ်က အပြင်စာဖတ်လျှင် ကလေးတွေ ရည်းစားထားမည်စိုးကာ တချို့မိဘတွေက တားမြစ်ချင်သော ခေတ်ပေကိုး။ အခုတော့ ဘာအမှတ်တရမှ မကျန်ခဲ့တော့ပါလေ။
နောက်ထပ် လူအများနဲ့ ကစားသည့် ကစားနည်းတွေကတော့ အားလုံး ကစားဖူးမည့် ရွှေစွန်ညို ၀ိုင်းကြီးပတ်ပတ် ထုတ်ဆီးတိုးတမ်း ဖန်ခုန်တမ်း စစ်တိုက်တမ်း ။ နည်းနည်းပိုပြီး အားကစားဆန်လာတာကတော့ ဘောလုံးကန် ကြက်တောင်ရိုက် ကျားထိုး စစ်တုရင်ထိုး။ အစ်ကိုနဲ့က မတိမ်းမယိမ်းဆိုတော့ ပေါက်ကရလုပ်ဖို့ တော်တော် အဖော်ရသည်။ ဘယ်မှ မထွက်ရဆိုလျှင်လည်း မောင်နှမနှစ်ယောက် အင်ဒိုး ကစားဖို့တော့ အဖော်ရနေသေးတာပဲ။ မောင်လေးကိုတော့ ငယ်ငယ်က တော်တော်ရှုပ်သည်ထင်သည်။ သူ့ကိုမခေါ်လို့လည်း မရ။ ကစားဖို့ သူငယ်ချင်းတွေဆီသွားလျှင် ကလေးပါခေါ်သွားဟု မေမေက တခါတည်း ကလေးထိမ်းခိုင်းသည်။ ကိုယ်က သိပ်မကြည်။ နောက်ပိုင်း သူတော်တော်လေး ကြီးလာတော့မှ ကစားတာ နည်းနည်း အဖော်ရ လာသည်။
နောက်ထပ် ကစားနည်းတွေ ပြောရမည်ဆိုလျှင် တကယ်တော့ အများကြီး ကျန်သေးသည်။ မှန်ကို နေရောင်မှာ ထိုးကာ ပလတ်စတစ် အရုပ်ကလေးများချ ပိတ်ကားထောင်ကာ ရုပ်ရှင်ပြတန်းတို့။ စက္ကူလှေ သစ်သားလှေ ကလေးတွေ ရေမြောင်းထဲ လွှတ်တာတို့၊ သဲအိမ်ကလေးတွေဆောက်တာတို့ စသည် စသည်။ နည်းနည်း လူကြီးဆန်ကာ ညစ်လာသည့် ဖဲရိုက်တာ ကက်ဆွဲတာလို ကစားနည်းကတော့ ရှစ်တန်း ကိုးတန်း အရွယ်လောက်မှ စတတ်မြောက်သည်။ အဲဒီအရွယ်ကတော့ ကလေးလေးလို့ မခေါ်နိုင်တော့ ထင်သည်။
ငယ်ငယ်က ကစားပုံ ကစားနည်းတွေဟာ ကြီးပြင်းလာတဲ့ ဘ၀နဲ့ ဘယ်လို ဆက်စပ်မလဲ ဆိုတာ တွေးကြည့်မိ နေသေးသည်။ အဲဒီအချိန်ကတော့ ကစားချိန် လုံလောက်တယ် လို့ကို မထင်လေ။ ကလေးဆိုတာ ကစားရမည် ဆိုလျှင် ၀ သည်လို့ကိုမရှိ မဟုတ်လား။ အခု ပြန်တွေးကြည့်တော့ အခုခေတ် ကလေးတွေနဲ့ ယှဉ်လျှင် ထူးထွေဆန်းပြား ကစားစရာတွေ မရှိသော်လည်း အိမ်ထဲရော အိမ်ပြင်မှာပါ တော်တော် ကစားချိန်ရခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ အပြင်စာတွေ ဆိုလည်း အိမ်မှာ ရှိတာတွေ ဖတ်နိုင်လို့ကတော့ လွတ်လပ်စွာ ဖတ်ခွင့်ရခဲ့သည်ပဲ။ ဒါတွေကြောင့် ကျောင်းစာကိုလည်း မလစ်ဟင်းခဲ့ပါ။ ကျူရှင်လည်း တက်စရာမလို။ အခုကြီးလာတော့ ဘာဖြစ်လာခဲ့သလဲ။ ဘယ်လိုဆက်စပ်သလဲ။
တကယ်တော့ ကလေးဘ၀က ကစားကြတာတွေဟာ ဘ၀သေးသေးလေးတွေကို စိတ်ကူးယဉ်ပြီး အစမ်း တည်ဆောက်ကြည့် နေကြတာ ဟုပင် ပြောနိုင်မည်ထင်သည်။ ငယ်ငယ်က ကစားနည်းတွေမှာလည်း ညှိနှိုင်းရတာတွေ ပါသည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ပါသည်။ လောဘလေးတွေ ပါသည်။ ပျော်ရတာတွေ ပါသည်။ ရန်ဖြစ်ရတာတွေ ပါသည်။ နိုင်တာ ရှုံးတာတွေလည်း ပါသည်။ ကစားပွဲ ပြီးတော့လည်း ပြီးသွားတာပဲ။ ကလေးတွေ ကတော့ ဖြူစင်ပါသည်။ အဲဒီလို ကလေးဘ၀က ဘယ်လိုပဲ အစမ်းတည်ဆောက်ခဲ့ ပေမယ့်လည်း အခုကြီးလာတော့ရော လူ့လောကရဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းတွေကြားမှာ လောဘဒေါသတွေ ချုပ်ထိန်းလို့ ဘ၀မှာ နေပျော်အောင် အနေတတ်ပါပြီတဲ့လား။ ပြီးပြီးပျောက်ပျောက်ရော သဘောထား နိုင်ပါသေးရဲ့လား။ အင်း… စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေကရော ပြီးဆုံးခဲ့ပြီလား။
အပြင်ကို ငေးကြည့်လိုက်တော့ သစ်ရွက်တွေပေါ်က သွယ်တန်းကျနေတဲ့ မိုးရေစီးကြောင်းတွေကို လေရူးက အပိုင်းပိုင်း ဖြတ်တောက်လို့ ဟိုလွင့်ဒီလွင့်။
Posted by pandora at 1:17 AM 10 comments
ငါက ကဗျာကောင်ကြီး ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်
ဘ၀မှာ ဘယ်နှစ်ခါ အ၀ါကဒ် အထိခံနိုင်သလဲ
အတွင်းအပ ထပ်တူကျ တည်ပါစေသတည်း”
ကိုင်းညွတ်နေသော မိုးလှိုင်ည ရေ
မင်းကတော့ ပစ်ချစရာ ဖေဖော်ဝါရီ ရှိခဲ့
ငါကတော့ ငါ့ကိုယ်ငါပဲ ရိုက်ချိုးရတယ်။
Posted by pandora at 8:56 PM9comments
- ချစ်လေပြေ တက်ဂ် ထားသော ငယ်ငယ်က ကစားနည်းတွေအကြောင်း (ရေးပြီး)
- ဂျစ်တူး တက်ဂ်ထားသော အိတ်ထဲမှာ ဘာရှိသလဲ (ရေးပြီး)
- Chaos တက်ဂ်ထားသော ကြောက်သောသတ္တ၀ါများ (ရေးပြီး)
- ကဗျာထုတ်တဲ့ စက်ရုံကြီး ရေးခိုင်းထားသော ဒါမျိုး
- မွန် တက်ဂ်ထားသော လွမ်းစရာလေးတွေ
- ဘာညာရဲ့ ဘာဂါ (ရေးပြီး)
- ဇီးရိုးထရက်ရှ် တက်ဂ်ထားသော ဘယ်လိုလူလဲ (ရေးပြီး)
- ညိမ်းညို တက်ဂ်ထားသော ရင်ထဲစွဲသည့် စာအုပ်များ
မေ့တယ်လို့ မထင်နဲ့။ မကြာခင် ဖြည်းဖြည်း ရှင်းပါမယ် ကြွေးရှင်တို့။ လာမယ် ကြာမယ်။ လောလောဆယ်တော့ ရင်ဘတ်ထဲက ထွက်ကျတာလေးတွေ ဖတ်နှင့်ဦးနော်။
Posted by pandora at 8:50 PM3comments
Posted by pandora at 12:20 AM 10 comments
အနုပညာ..တဲ့။ လှပကျယ်ဝန်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ဝေါဟာရတစ်ခု။ ဘလော့ဂ်ကို ရေးတယ်။ အနုပညာကို ရေးတယ်။ ဘလော့ဂ်က ကိုယ့်ကိုပြန်ရေး၊ အနုပညာက ဘလော့ဂ်ကို ပြန်ရေးသွားခဲ့တယ်။
ဘလော့ဂ်ရေးသားခြင်း ထဲမှာ အနုပညာ စီးကူးမှုတွေရှိခဲ့။ လရိပ်မှုန်ပျပျမှာ ကဗျာဆရာနှင်းခါးမိုးက ဒီလို ဖွဲ့ဆိုခဲ့။ ကိုယ်ရေးမိတဲ့ မှတ်ချက်က ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့။ မေတ္တာရှင် တစ်ယောက်က ဒီပို့စ်ရဲ့ခေါင်းစဉ် ဖြစ်လာဖို့ စကားလုံးတချို့ ထွက်ကျသွားခဲ့။
Posted by pandora at 2:36 AM7comments
၂၀၀၇ မတ်လ ၂၇ ကစလို့ ပန်ဒိုရာ နာမည်နဲ့ ဘလော့ဂ်ရေးခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ယူကေက ညီမလေး တစ်ယောက်က ဒီနာမည်နဲ့ ဘလော့ဂ်ရေးပြီး လိပ်စာမှာလည်း ပန်ဒိုရာ ဆိုတဲ့စာလုံး ၂ လုံး ယူပြီး http://www.pandora-pandorabox.blogspot.com/ လို့ ဘလော့ဂ် အသစ် ပြီးခဲ့တဲ့ ၁ ရက် ၂ ရက်က စရေးထားပါတယ်။ ပန်ဒိုရာဆိုတာ ရှိခဲ့မှန်း သူ မသိခဲ့လို့ နေမှာပါ။ ဆီပုံးမှာ လာပြောသွားပါတယ်။ သူလည်း ဒီနာမည်လေးကို နှစ်သက်ပုံရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း တခြားဘလော့ဂ်တွေ သွားလည်တဲ့အခါ ပန်ဒိုရာ နာမည်နဲ့ ရေးသား နှုတ်ဆက်တာတွေမှာ ရောထွေးမှာကို မလိုလားပါဘူး။ လာလည်သူများကိုလည်း မရှုပ်ထွေးစေလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ နာမည်ဆင်တူ မဖြစ်အောင် ဟောဒီ ပန်ဒိုရာက နာမည်ပြောင်းရင် ကောင်းမလားလို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။
ပန်ဒိုရာဆိုတဲ့ နာမည်ကို ဘာကြောင့် ယူခဲ့သလဲ ဆိုတာကိုတော့ အခု အချိန်မှာ ပြန်ရှင်းပြ မနေချင်တော့ပါဘူး။ ကိုယ်သေသွားလည်း အားလုံးထားခဲ့ရမယ့် လောကကြီးမှာ အစွဲအလန်း မကြီးတာပဲ ကောင်းမယ် ထင်ပါရဲ့။
နာမည်ပြောင်းရင်တော့ ဘလော့ဂ် လိပ်စာပါ ပြောင်းစရာ လိုကောင်း လိုလာပါမယ်။ နာမည် နဲ့ ဘလော့ဂ် လိပ်စာ ပြောင်းသင့် မပြောင်းသင့် ဆိုတာနဲ့ နာမည်အသစ် ဘယ်လိုပေးရင် ကောင်းမလဲ ဆိုတာကို ပန်ဒိုရာကို လာဖတ်နေကျ မိတ်ဆွေများနဲ့ တိုင်ပင်ချင်ပါတယ်။ မြန်မာလိုဖြစ်စေ အင်္ဂလိပ်လို ဖြစ်စေ ဒီပို့စ်ရဲ့ မှတ်ချက်မှာ အကြံဥာဏ်ပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
(မှတ်ချက်။ ။ ယူကေက ညီမလေးက နာမည်ပြောင်းလိုက်သဖြင့် ပြေလည်သွားပါပြီ။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ )
Posted by pandora at 11:19 PM 17 comments
Posted by pandora at 12:23 AM 23 comments
Posted by pandora at 3:52 PM9comments
Posted by pandora at 9:15 AM3comments
Posted by pandora at 8:57 PM 1 comments
စစ်ပွဲ၊ ဒုက္ခသည်၊ ကပ်ဆိုက်မှုများ...တဲ့
ကျည်အပြည့်ထိုး မောင်းတင်ထားတဲ့ ကဗျာတွေ
တခါလာလည်း ဒီခေတ်ကြီး နဲ့
ဘယ်တော့များမှ အရည်ကျို အရောင်ချွတ်
ဟောဒီမှာ ခင်ဗျားတို့ အတွက် တဲ့
အို.. နားလည်ယုံကြည်မှု နဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ
အခုတလော ပြန်ဖတ်ဖတ်နေတဲ့ ဒီကဗျာတွေ နဲ့ ဒီကဗျာတွေ ကြောင့် အခုလို ကဗျာတစ်ပုဒ် ရေးဖြစ်ဖို့ လှုံ့ဆော်စေပြီး အာရုံရခဲ့တယ်။ ကဗျာခေါင်းစဉ်ကို ရှည်ရှည် ပေးမိသွားတာကတော့ နောက်ကဆရာရဲ့ ပယောဂ မကင်းဘူး။
Posted by pandora at 12:24 AM3comments